Company Profile - Xizi erevheta Co., Ltd
XIZI erevheta CO., LTD munhu wose-vaiva chikamu kubva XIZI UHC, pamwe zvizivikanwe zita "XIZI" (vachinzi "XIZI"). The kambani nangananga kumisika mukuru-magumo, aiming panguva zvaikosha inokosha kukura erevheta bhizimisi XIZI UHC. The muchiso XIZI zvinogona dating shure mugore 1981. Saka kure, ichi hachizi muchinjikwa remakore yave kwemakore anopfuura 30, uye akapa hwaipfuura chivakwa chokufambisa negadziriso kunyika dzinopfuura 60 uye kumatunhu munyika, nguva akahwina musika pamutemo uye nemumwe kuvimba. XIZI rinotsinhirana kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira, pakuti kudzokera fundament, anobudisa zvinhu zvakakwana apo kugara wechokwadi basa.
Kudzimbahwe XIZI riri Lakeside pamusoro Qingshan Lake inozivikanwa se "Green nesilicon Valley". The kambani ine vakanyoresa guta guru rmb mamiriyoni 2.155 Currencykuva pamusoro vashandi 3,000. Chinhu aitungamirira soro-mugumo erevheta zvebhizimisi munyika China, vonyanya revatema design, R & D, gadzira, yokutengesa, kugadzwa uye pashure-okutengesa basa escalator zvigadzirwa. Products of kambani kunosanganisira mutakurwi erevheta, Panoramic erevheta, Machine roonless elevaror, chipatara erevheta, mitoro erevheta, escalator, kutamira wetsoka, musha erevheta etc., 8 akatevedzana uye erevheta mhando pamusoro 10.
The kambani netsoka ari indasitiri kwemakore anoda kusvika 35 makore, ane kwesayenzi zvikukutu uye utsanzi simba. Zvino ane vanopfuura 300 zvekushandisa vashandi, 60 bvumidzwa zvirongwa, inozviita 20 kiyi tsvakurudzo uye kubudirira zvirongwa uye chinonyengera 3 kana 4 zvigadzirwa zvitsva averagely pagore. Panguva ino, kambani corporately akamisa XIZI Research Institute of Zhejiang University pamwe Zhejiang University. Chokushandira aigara nomukurumbira mumayunivhesiti akadai Tsinghua University uye Shanghai Jiaotong University, XIZI akagadza ayo R & D centre, kudhinda & gadzira centre, vatatu chikuva rakanaka rokuongorora muzinda mukufamba nokutsvairwa specialization mishonga, mazuvaano kuti mukugadzira uye akawedzera vachida. Vanobatisisa pfungwa "Kufambira pamwe Times, runoramba Innovation", kambani iri nguva dzose kuchengetedza simba makwikwi.
The kambani akatotanga vanopupurirwa ne ISO9001 Quality Management System, ISO14001 Environmental Management System, OHSAS18001 Basa Health uye Safety Management System uye musika kupinda advertising pamusoro soro chechetere munyika, akadai CE advertising kuti EU musika kupinda yokutungamirira chigadzirwa, CSA advertising nokuti North America musika kupinda, etc. The kambani ane mukugadzira rezinesi mukuru chechetere mudzimba bhizimisi uye Level A yokugadza, tinoshandurwa nokuchengetedza mvumo.
The yokutengesa richikurukura kambani anoumba munhu inokosha anopa "Mumwe kudzimbahwe, kumatunhu shanu guru", pamwe zvinhu vatiitire nemativi ose munyika. XIZI akagadza 34 emapazi uye 28 masangano nedzimwe nechepakati maguta, akadai Hangzhou, Jinan, Changsha, Xiamen, Chengdu, Shangai, Tianjin, Xi'an, Hefei uye Nanjing, nezvimwewo, vakaita kupa "mumwe-chemabhazi" renguva yakazara kuti vatengi. The erevheta mano vari aivigirwa kunyika 70 uye dzine kusanganisira Europe, kuMiddle East, Southeast Asia uye Australia, etc. Zvichakadaro, kambani akagadza masangano akasiyana-siyana zvakakwana uye refu inokosha pamwe nevarume uye akaumba tsime-yakasimbiswa oversea rokutengesa uye basa gadziriro.
"Nemwoyo wose basa nerimwe erevheta, zvinopa zvisingakuvadzi uye zvigadzirwa kuti vatengi zvisingaperi" ndiro basa muuzivi XIZI. The kambani achisimbirira zvavakanga vachida kuita mweya kuramba pakutsvaka vakachengeteka, kushanda zvakanaka, simba-okuponesa uye ichinyaradzwa zvigadzirwa, kuti ape nyika kirasi ano, chigadzirwa uye basa vatengi.